अब टाउकोमा कपाल उमार्न बैंकले ऋण दिने, अघि बढे नविल, ग्लोबल आईएमई र एनआईसी एसिया  BikashNews
२०७५ वैशाख २९ गते १५:४२ राजाराम न्याैपाने
काठमाडौं । तपाईको कपाल झरेको छ ? तपाई नयाँ कपाल उमार्न चाहानु हुन्छ ? तर यसका लागि पैसा छैन भने अब चिन्ता नलिनुस बैंकले कपाल उमार्नका लागि ऋण दिने भएको छ ।
नविनतम प्रबिधिबाट बिगत ३ वर्षदेखि कपाल प्रत्यारोपण गर्दै आएको आरोगिन हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरले कपाल प्रत्यारोपणका लागि ऋण लिनका लागि बैंकसँग सम्झौता गरेको छ । नविल बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र एनआईसी एशिया बैंकबाट ऋण लिन सम्झौता गरेको सेन्टरकी अस्मीता पन्तले बताइन । उनका अनुसार कपाल प्रत्यारोपण गर्न न्युनतम १ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म लाग्छ ।
एक मुष्ठ पैसा दिन नसक्ने वा पैसा नभएकालाई आयस्रोत हेरेर समय राखेर कपाल प्रत्यारोपण गर्ने सुविधा समेत रहेको उनले जानकारी दिइन । नविनतम प्रबिधिबाट बिगत ३ वर्षदेखि आरोगिन हेल्थ केयरले कपाल प्रत्यारोपण गर्दै आएका छ । तालुपना भएको ठाउमा प्राकृतिक रुपले कपाल वृद्धि हुने एक मात्र उपाय भनेको प्रत्यारोपण हो ।
“नेपालमा डाइरेक्ट हेयर ट्रान्स प्लान्ट हामीले सुरु गरेको हौँ । अहिलेसम्म ५०० जनाको कपाल प्रत्यारोपण गरिएको छ” उनले भनिन् । उनकाअनुसार ३० देखि ५० वर्ष भित्रका मनिसहरुले कपाल प्रत्यारोपण गरेका छन् । २५ जना महिलाले मात्रले कपाल प्रत्यारोपण गराएको सेन्टरले जनाएको छ । पुरुषको डीएचटी हर्मनका कारणले कपाल झर्छ भने महिलामा यो हर्मन हुँदैन । त्यसैले पनि महिलाहरुको कपाल थोरै मात्रामा झर्छ ।
“पुरै टाउको भरिकै कपाल झरिसकेको अवस्थामा कपाल प्रत्यारोपण गर्न सकिदैन । त्यस्ता व्यक्तिहरु आएका बेला हामीले सरी भनेर पठाएका छौँ”उनले भनिन्। कपाल प्रत्यारोपण गराउनेहरुमा सबैभन्दा धेरै व्यापारीहरु छन् ।
कपालको सोख भएका पुरुसहरुले थोरै कपाल पनि प्रत्यारोपण गर्न आउर्ने गरेका छन् । हाम्रोमा अन्य ठाँउबाट कपाल विगारेर आएका धेरैलाई प्रत्यारोपण गरेर पठाएको पन्तले जानकारी दिइन् । यसको लागत धेरै भएकाले सामान्य आर्थिक हैसियत भएकाहरुले कपाल प्रत्यारोपण गर्न गाह्रो हुन्छ । कसैको कपाल झर्ने अथवा झरेर चिल्लो नै भएको छ भने टाउकोको फोटो खिचेर पठाए हुने व्यवस्था सेन्टरमा गरिएको छ । कपाल प्रत्यारोपण गर्न लाग्ने समय र लागत अनलाइन मार्फत नै जानकारी दिने समेत पन्तले बताइन् ।
कपाल प्रत्यारोपण एक प्रक्रिया हो जसमा डाक्टरले टाउको पछाडीको भागबाट कपालको जरा निकालेर अगाडी तालुपना भएको भागमा प्रत्यारोपण गरिन्छ । पहिलो फोलिक्युलर युनिट एक्स्ट्रयाक्सन विधि हो ।
डाइरेक्ट हेयर ट्रान्स प्लान्ट अर्को विधि हो । जुन विश्वमै आधुनिक तरिका हो । यसमा एक(एक फोलिसीस युनिट अथवा ग्राफ्टलाई निकालिन्छ । जुन घाउ एक दुई हप्तामा सञ्चो भएर जान्छ । यसरी निकाल्दा खत बस्दैन । यो प्रवधिअनुसार कपाललाई निकालेर स्टोर नगरी तुरुन्तै प्रत्यारोपण गरिन्छ ।
कपाल प्रत्यारोपण गर्दा टाउकाको पछाडि पट्टिको भागको कपाल जसलाई ‘एन्ड्रोजेन इन सेन्सेटिभ एरिया’ भनिन्छ त्यही भागको कपाल निकालेर कपाल झरेको भागमा एक–एकवटा ग्राफ्ट प्रत्यारोपण अर्थात् रोप्ने काम गरिन्छ । सर्जरीको माध्यमबाट कपाल प्रत्यारोपण गर्दा मानिसलाई बेहोस बनाउनु पर्दैन । कपाल निकाल्ने र प्रत्यारोपण गर्ने भागमा अस्थायी एनेस्थेसिया दिएर प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ ।
यसरी रोपेको कपाल २ देखि ३ महिनापछि झर्छ । तर, १० देखि १६ हप्ताको बीचमा कपाल अझ बाक्लो भएर उम्रिन्छ । २ हजारवटा ग्राफ्ट कपाल प्रत्यारोपण गर्न ६ देखि ८ घण्टाको समय लाग्छ । प्रत्यारोपण गरिएको कपाल एक दुई महिनामै झर्छन् र त्यही जराबाट नयाँ कपालहरु पलाउन थाल्छन् । तिन चार महिना भित्र पूर्ण रुपमा पलाउछ ।
टाउकोमा पाँचवटा पत्रहरु हुन्छन् । सबैभन्दा माथिको छालामा कपाल हुने गर्दछ । हाम्रो दिमागलाई यी पत्रहरु भन्दा तल रहेको स्कोल बोनले संरक्षण गरेको हुन्छ । कपाल प्रत्यारोपण चाहिँ छालामा गरिने भएकाले कुनै असर गर्दैन ।